Maxaa loo xeeriyey in Bangiga Dhexe uu maamuli karo qof ajnabi ah? – Kalfadhi
Dad badan ayaa u arka in, iyada oo ay muwaadiniin Soomaaliyeed ku shaqa la’yihiin dalka, wax looga beddelay Xeerkii Bangiga Dhexe shaqaaleysiinta qof ajnabi ah, oo ay dadka aragtidaas qaba rumeysan yihiin iney jiraan dad leh dhamaan waxa lagu door-bidayo ajnabigaas. Waxay qaarkood qaada waa’ u arkaan in qof la sii og yahay ruuxa uu yahay dartii wax looga beddelay Sharci Qaran oo jiray labaatameeyo sano. Sidaas waxay ku dhex muujinayeeyn bogagooda bulshada.
Kasakow damacaas, markii hore ka yimid xukumadda, waxaa dad badan fila waa’ ku noqday in Xildhibaannadii joogay kulanka wax looga beddelayey xeerkaas ay 90.3% taageereen u beddelidda Xeerka Bangiga Dhexe inuu ka shaqeyn karo, maamuli karana qof ajnabi ah, halka ay markii hore ka ahayd in cidda Bangiga Dhexe maamuli karta ama ka shaqeyn karta ay tahay uun muwaadin Soomaaliyeed.
Hase ahaatee, dad badan ayaa Dowladda iyo Golaha Shacabkaba ku garab istaagay go’aanka wax looga beddelay xeerkaas, waxayna u soo tusaala qaadanayeen ineysan ahayn markii ugu horeysay oo ay dowladdu xeeriso iney ajnabi maamuli karaan hantida iyo shaqada qaranka. “Horay ayey dowladdu ugu ogolaatay iney shirkado ajnabi ah maamulaan Dekedda iyo Garoonka Diyaaradaha Muqdisho iwm” ayey in badan oo go’aanka dowladda taageersan soo dhigayeen barahooda bulshada.
Maxamed Macalin Aadan (Barawaani), oo ah Macalin Culuumta Dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Muqdisho, ayaa ku yiri Kalfadhi “Inkastoo ay muhiim tahay in la xoojiyo hay’adaha maamula dhaqaalaha dalka, haddana in sharci dalka u yiilay wax laga baddalo, si fursad loo siiyo dad Ajinabi ah, waxaan is leeyahay, marka la eego xiliga ay kusoo beegmeyso, duruufaha dhaqaale ee shaqo la’aantu ay kamid tahay ee dalka ka jira iyo in la heli karay dad Soomaali ah oo booskaas buuxin kara, walaac badan ayey abuureysaa”.
Xildhibaan Daahir Ammiin Jeesow, oo si adag u difaacay wax-ka-beddelka Xeerka Bangiga Dhexe, si loo sharciyeeyo inuu qof ajnabi ah ka shaqeyn karo, ayaa u sheegay Kalfadhi in cidda loogu daneeneynayo shaqaaleysiinta janbiga aysan ahayn qofka ee ay tahay qaranka. “Sharci markii la ansixinaayo waxaa ugu weyn hal qodob oo ah faa’iidada uu u leeyahay dalka, ma ahan shaqsi” ayuu yiri Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow.
Xildhibaan Sakariye Xaaji Maxamuud, oo qaba ineysan hadda jirin baahi loo qabo in ajnabi ka shaqeeyo Bangiga Dhexe, sidaasna si fiican uga dhex caddeeyey kulankii Golaha ee lagu anisixiyey wax-ka-bedelka Xeerka Bangiga Dhexe, ayaa u sheegay Kalfadhi inuu Golaha Shacaku ku tuntay kalsoonidii ummadda, sida uu hadalka u dhigay. “Waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego in wax-ka-badalka sharcigaas uu ahaa mid qalad ah iyo in lagu tuntay xeerkii u yiilay ummadda Soomaaliyeed, oo tan 1960-kii markii aan xornimada qaadanay ilaa maanta lagu dhaqmaayey” ayuu yiri Xildhibaan Sakariye.
Xildhibaanku waxa uu u arkaa hindisaha la meel-mariyey uu liddi ku noqon doono Soomaalida aqoonyahanka ah ee leh xaqa koowaad ee ah ka shaqeynta iyo maamulidda Bangiga Dhexe. Waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in Xeerka Bangiga Dhexe uu wixii hadda ka dambeeya halis ku yahay fursadaha Bangiga ee u banaan muwaadiniinta. Hase ahaatee Xildhibaan Jeesow ayaa aad uga aragti duwan Xildhibaan Sakariye, oo waxa uu qabaa in, sida uu sheegay, lagu saleeyo dad ka shaqaaleysiinta Bangiga Dhexe 4.5 ay ka fiican tahay in gabigeesba loo gacan geliyo ajnabi.
“Maxaa Bangiga kaliya loo fiirinayaa maamulkiisa, oo loo siyaasadeynayaa? Dekadda Soomaaliya oo dakhliga ugu badan uu kasoo xaroodo waxaa noo maamula shirkaddo aan soo ijaaranay, oo qandaraas aan la soo galnay, Garoonka Diyaaradaha sidoo kale” ayuu yiri Xildhibaan Jeesow. Waxa uu sheegay in go’aanka uu Isniintii hore qaatay Golaha Shacabka uu muujinayo sida ay Soomaaliya u tahay dal furfuran, oo la aamini karo.
Sida uu qabo Dhaqaalyahan Maxamed Barawaani, waxaa go’aanka Golaha Shacabka ee u dhacay sidii ay rabtay Xukumadda Soomaaliya, oo ah in la xeeriyey inuu Bangiga Dhexe ka shaqeyn karo ajnabi, ay keeni karto iney dowladdu lumiso kalsoonida shacabka. “Arrintaan waxaa ka dhalan kara kala aragti duwaanshiyo soo kala dhex gasha dadka Soomaaliyeed, aaminina waayaan dowladdooda, iyagoo u arkaya in ajinabi fursad la siinayo” ayuu yiri Barafasoor Barawaani.
Lama oga in Meel-marinta Wax-Ka-Beddelkii lagu sameeyey Xeerka Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ay, sidoo kale, ka doodi doonaan Golaha Aqalka Sare, si ay u ogolaadaan ama u diidaan. Balse Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow waxa uu u sheegay Kalfadhi ineysan la tahay inuusan Golaha Aqalka Sare wax shaqa ah ku lahayn arrimaha la xiriira maaliyadda. “Uma maleynayo, mana u tagaayo (Aqalka Sare), sababtoo ah sida aan qiyaasaayo wax maaliyad ku saabsan ma tagaan Aqalka Sare” ayuu yiri Xildhibaan Jeesow.